मेरो एउटा सपना छ, अनि तपाईको नी ? Setokhari ::. News Portal
बुधबार, माघ ७, २०७७ ०३:२०:४६
मेरो एउटा सपना छ, अनि तपाईको नी ?
सपना भनेको जीवनको लक्ष्य हो । सपना बिना जीवन अधुरो नै हुन्छ । त्यसैले सपना देख्नु मानिस हुनुको सही अर्थ हो जस्तो लाग्छ मलाई । हामी धेरै जनाको सपना जीवनमा सुख पाउने र सफल हुने नै हुन्छ । तर, कसरि जीवन सुखी हुन्छ ? सफलता कसरी हाँसिल गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरामा भने ख्याल भने राख्दैनौँ ।
विश्वका सफल व्यक्तिहरु भन्छन्–‘सपना देख, असफल व्यक्तिहरु भन्छन् धेरै सपना नदेख ।’ सपना देख्नुपर्छ, उद्देश्य राख्नुपर्छ । तर, त्यसै अनुरुप कार्यसम्पादन पनि । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यसै भनेका होइनन् ‘उद्देश्य के लिनु उडी, छुनु चन्द्र एक’ भनेर । दशकौदेखि हामी नेपालीले किन विकाश गर्न सकेनौं ? हामीसंगैका मुलुकहरु आज कहाँ पुगी सके, हामी किन उधो गतिमा छौँ ?
‘सपना’ एक सुन्दर शब्द । मेरो सफलता, प्रेरणा, साथ हो । मन, मस्तिष्क र मेरो मुटुमा बसेको एक सुनौलो बिहानी हो मेरो सपना । मिठो बिहानी बनेर आउँने छ मेरो सपना । आमा बाबाले भन्नुहुन्छ ‘तिमी सानैदेखि एक मेहनती र सहयोगी मान्छे हौँ । तिमीले आँट गरे सबै कुराहरु गर्न सक्छौं ।’
सानैदेखि राम्रा–राम्रा मान्छेरूको बिचमा बस्ने मेरो बानीले मेरो आत्मविश्वास बढाएको छ । आफ्नो मनको कुराहरु गर्ने मेरो बानीले मलाई भविष्यमा एक असल ब्यक्तिको रुपमा चिनाउने छ ।
समयसँग बिस्तारै आगाडि बढियो भने आफ्नो सपना छिटो साकार हुँदैछ है भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिने रहेछ भन्ने मेरो बिचार हो । थाहाछैन पछि के हुन्छ, अथवा के होला भनेर तर, मनले मलाई तिमी सक्छौं मात्र भन्छ , सायद मैले सक्छु पनि होला र ??
सानैदेखि हरेक दिन, हरेक वर्षको मेरो उद्देस्य बनेको छ मेरो सपना । एउटा विद्यार्थीका लागि परीक्षामा प्रथम हुनु सफलता हो । भने खेलाडीका खेल जित्नु । नेताका लागि चुनाव जित्नु सफलता होला, प्रेमी–प्रेमिकाका लागि मन जित्नु या विश्वास जित्नु आदि । साधारणतया कसैले गरेको प्रयास सार्थक हुनु भनेको उसको लगाव, मेहनत, परीश्रमको फल हो । र सपना असफल हुनु आफ्नो गल्ती मान्नुपर्छ है ।
ऐ सपना !
हेर्दै जा न सपना, एकदिन म पनि सफलता प्राप्त गरेको एक युवा, एक असल नारी भएर यो देशमा सबैका सामु आइपुग्ने छु । निदायको शहर होईन, ब्युँझिएको शहर हेर्ने रहर छ । दुःखी मुख हैन, ओठ्मा हाँसो भएको हर्न मन छ । साँझ ७ बजे आमा घरबाहिर मेरा लागि पर्खेर बसेको हैन घरभित्र बुबासँग आफ्नो यादहरु ताजा गरेको हर्न मन छ ।
म कुनै प्रतियोगिताबाट जितेर हैन्, १०० चोटी हारेर जितेको हेर्न मन छ । भाईले दीदि आज मेरा लागि के लाउनु भयो हैन्, दीदि घर आउँदा केही समस्या त भएन नि भनेको सुन्न मन छ । सायद बिगत केही समयदेखि म धेरै कुराहरु बुझ्ने भएकी छु । तर, मेरो मन भने अझैँ मजबुत भएको छैन् । सा–सानो कुराहरूमा पनि मेरो रुने बानीले मलाई आझैँ मजबुद बनाएको छ ।
कल्पना गर यो मन तर, चिन्ता नगर । म एक दिन असल नारी, एक सफल व्यक्ति र असल छोरी बन्नेछु । देश र देशप्रतिको मेरो भावना र माया सधैं आगाडि रहनेछ । न त म मेरो देशको मायालाई मर्न नै दिनेछु न त मेरो सपनालाई ।
समाजमा ब्याप्त लैङ्गिक हिंसा, दुव्र्यवहार, उत्पिडन र अन्यामा परेकालाई न्यया दिदै अपराध जरैदेखि निर्मुल पार्ने मेरो ध्येय छ । महिला र नारी मैत्री बन्न नसकेको मेरो समाजको म त्यस्तो ऐना बन्न चाहान्छु की मलाई हेरेर हजारौं महिलाले अनुसरण गर्नसकुन् । त्यसका लागि म तयार छु । म त्यही अनुरुप अघि बढिरहेकी छु । यसका लागि अग्रसर म असल र सफल वकिल बन्ने सपना बोकेकी छु । समयको खेलले मलाई कहिले कहाँ लिन्छ थाहा छैन् । तर, मेरो एक मात्र लक्ष्य भनेको मेरो सपना पुरा गरेरै छाड्ने छु । म त्यो दिन सफल हुन्छु, जुन दिन कालो कोट लगाएर तिमी सामु आउने छु बा ।
सपना मर्नु नै आफू मर्नु हो । जिउँदो मूर्दाको निशानी हो । हाम्रो अलमल र अन्योलताको कारण अजम्बरी सपना फुल्न नपाई बतासको तीव्र झोक्काले कतै बिरानीमा उडाएर लाने त होइन ! यसो भइदियो भने ‘सबैभन्दा खतरनाक’ क्षणको साक्षी म मात्र नभई समस्त मानव समाज हुनेछ ।
सपना देख्नुस्, पैसा लाग्दैन । तर सपना साकार पार्नुस् त्यो ईतिहासमा सुनौला अक्षरले लेखिनेछ । के तपाईले समाज रुपान्तरण गर्ने सपना देख्नु भएकोछ । छ भने त्यसलाई पुरा गर्न ढिला नगर्नुहोस् । यदि छैन भने तपाई पनि त्यही लाखौं करोडौंको भीडमा हराउनुहुनेछ । तपाईको अस्तित्व गुम्नेछ । सपना देख्नुपर्छ । दिवा सपना होइन, न त रात्री सपना । सपना लक्ष्य प्राप्ती र उद्देश्य पूर्तीका लागि देख्नुपर्छ ।